Ọkọdọ ọtụtụ ozi bịara jupụta n'elu gị iPhone ma na-ha na-eme gị Ozi ngwa achọ niile cluttered? Ọfọn, dabara nke ọma na iPhone, ihichapụ ochie ozi dị mfe na ị pụrụ ime ya n'oge na-adịghị na niile na ọbụna ka o guzo ọtọ ime-akpaghị aka.
Ọ bụghị nanị na nke a ụzọ magburu onwe nke enweghị ike iche banyere ọtụtụ achọghị ozi ịlụ echekwara na gị iPhone kamakwa bụ otu ụzọ ọzọ nke na-azọpụta na oké ọnụ ahịa nchekwa na ị nwere na gị iOS ngwaọrụ.
Part 1: Olee na-akpaghị aka ihichapụ ochie ozi na iPhone
Part 2: Olee ka ihichapụ zọpụta ozi na-adịgide adịgide site iPhone
Nkebi nke 3: Jiri nzọụkwụ nyere n'okpuru iji ihichapụ mbụ ehichapụ ozi na iPhone na-adịgide adịgide
Part 4. Olee ka ihichapụ multiple ozi site na iPhone
A bụ otú na-akpaghị aka ihichapụ ochie ozi na iPhone.
Nzọụkwụ 1: Malite na ngwa Ntọala wee pịa on Ozi.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, pịa na nhọrọ Nọgidenụ Ozi na ị ga-ahụ n'okpuru ngalaba Ozi History.
Nzọụkwụ 3: Họrọ ọtụtụ ụbọchị (1 afọ ma ọ bụ ụbọchị 30) mgbe nke ị ga-achọ iOS ka ihichapụ ozi gị na-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 4: Ma, nke ikpeazụ nzọụkwụ, pịa on Nhichapụ nhọrọ nkwenye usoro nke akpaka nhichapụ-aga n'ihu.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụzọ nke ihichapụ ozi echekwara na gị iPhone, ndị nkịtị ndị na-adịghị n'ezie ka ehichapụ ozi irretrievable. Nke ahụ ziri ezi, onye ọ bụla na-ezu nke oru ihe ọmụma ma ọ bụ n'ihi na okwu na-ebu nri software nwere ike mgbe niile naghachi furu efu ozi na gị iPhone na nke na-adịghị-ada ka a nnọọ ezi ihe.
Ya mere, iji jide n'aka na i kwesịghị iche banyere gị na-n'ọnọdụ a mgbe, anyị chọrọ ịme ka ị kasị mma iPhone data nchicha software mgbe mere na n'ụzọ dabara adaba na-akpọ, na Wondershare SafeEraser. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị dị irè software i nwere ike inwe aka gị na taa na iji ya hichapụ ihe niile ozi gị na ndị ọzọ na data kwa na a 100% mma na n'ihe ize ndụ free n'ụzọ. Ebe a bụ ndepụta atụmatụ na nke a nifty ngwa obụrede mbụre nke:
1 Pịa nzacha na mkpocha - Chọrọ ọcha niile junk gị iPhone na na kwa na nanị otu click? Na naa!
Photo Compressor - mpikota onu elu àgwà, ibu sized photos weghaara eji gị iPhone.
Ihichapu Private Data - ere ma ọ bụ egweri gị ochie ekwentị na-enweghị nchegbu banyere njirimara na-ezu ohi mgbe.
Ihichapu ehichapụ faịlụ - Ọ na-abịa na nkà na ụzụ na-eji US Military iji hụ na ehichapụ data na gị iPhone-ehichapu ruo mgbe ebighị ebi na-enweghị a Chọpụta.
Ihichapu All Data - Hichapụ niile data gị iPhone na-enweghị iji weghachi na ngwaọrụ gị ụlọ ọrụ ntọala ma ọ bụ na-aga n'ụzọ nke dịrị ya mgbe ọzọ.
Ya mere ọ bụrụ na ị hụrụ ugbu a, Wondershare SafeEraser bụ nanị ngwá ọrụ ọ bụla iPhone ọrụ nchegbu banyere nchekwa nke ya ma ọ bụ ya data ga-ebi mkpa. Ebe a bụ otú iji ya.
Nzọụkwụ 1: Mwepụta SafeEraser mgbe unu ọma arụnyere na ya ma họrọ nhọrọ nke ihichapu Private Data.
Nzọụkwụ 2: SafeEraser ga ugbu a na-amalite ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị na-akpaghị aka na-egosi na ị na Doppler ọganihu.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo scanning na-eme na a nkeji ole na ole, SafeEraser ga-depụta niile gị onwe data na ya na ihuenyo. Ị nwere ike wee họrọ nhọrọ nke 'Ozi' site n'aka ekpe n'akụkụ aka wee pịa bọtịnụ 'ihichapu Ugbu a'.
Nzọụkwụ 4: SafeEraser ga-arịọ gị iji gosi ugbu a na ị chọrọ niile nke data na ozi gị ehichapụ, n'ihi ya, pịnye ke 'ihichapụ' na pịa na button 'ihichapu Ugbu a' otu ugboro ọzọ.
Nzọụkwụ 5: Ozugbo data na-ehichapụ, ị ga-ahụ a na ihuenyo yiri onye na foto nyere n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Press na nhọrọ ihichapu ehichapụ faịlụ site na isi interface nke ngwa SafeEraser.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a ngwa ga na-amalite ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị niile trashed ma ọ bụ na mbụ ehichapụ data gụnyere ozi gị.
Nzọụkwụ 3: N'otu oge, ndị scanning a mere ọ ga-egosipụta niile data faịlụ na a hụrụ gụnyere ozi. Ị nwere ike ugbu kaa Ozi nakwa ndị ọzọ data ma ọ bụrụ na ị chọrọ ha niile ehichapu kpamkpam na mgbe ahụ pịa bọtịnụ ihichapu Ugbu a.
Nzọụkwụ 4: Nke a bụ mgbe ngwa ga-akpali gị pịnye ke 'ihichapụ' nke na i nwere ike nyochaa ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ihichapụ kpam kpam gị trashed ozi na ndị ọzọ na data.
Nzọụkwụ 5: Ozugbo nhichapụ zuru ezu, SafeEraser ga gosi na gị dị ka nke ọma na a ihuenyo dị ka nyere n'okpuru.
Nkebi nke 4: Olee ka ihichapụ multiple ozi site na iPhone
Ọ bụrụ na ị chọrọ ihichapu multiple ozi site na a ekwentị kọntaktị nke unu, kama ọ na-achọghị dum mkparịta ụka ehichapụ, e nwere ụzọ i nwere ike ime na-eji iPhone. Nanị na-eso nzọụkwụ nyere n'okpuru na ị ga-eme nnọọ mma.
Nzọụkwụ 1: Gaa na ngwa Ozi na gị iPhone Home ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, họrọ kọntaktị onye ozi ị chọrọ ka ihichapụ.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a, pịa ma jide on na ozi ị chọrọ ka ihichapụ ruo mgbe ị ga-esi na-esote set nke nhọrọ site na nke họrọ onye na-ekwu 'Ọzọ'.
Nzọụkwụ 4: Ozugbo ị họrọ 'Ọzọ', ị ga-ahụ a obere gburugburu na-esote niile ozi site na kọntaktị. Ugbu a ọ bụ oge akara ndị ị chọrọ ka ihichapụ site na ịpị na ndị a na okirikiri.
Nzọụkwụ 5: Ugbu a, nnọọ pịa nhọrọ nke 'Nhichapụ Ozi' na ala nke gị na ihuenyo ka ihichapụ dị nnọọ ozi ị akara.
> Resource> iPhone> Olee otú iji Hichapụ / Doro Anya Ozi na iPhone